၂၀၂၀ အောက်တိုဘာတွင်ကြည့်ရှုမည့်ရုပ်ရှင်နှင့်စီးရီးအသစ်စာရင်း - TELES RELAY
မကြာသေးမီရက်များအတွင်းအပူချိန်သိသိသာသာကျဆင်းသွားသည်၊ သို့သော် Netflix ပရိုဂရမ်အသစ်ကိုကြည့်ရှုနေစဉ်တွင်သင်ကိုယ်တိုင် plaid တစ်ခုဖြင့်ဖုံးအုပ်နိုင်ခြင်းကြောင့်အဆင်ပြေပါသည်။
နွေရာသီအဆင်ပြေချောမောစွာဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့စိတ်ဓာတ်မကျပါ။ အမှန်မှာ၊ ဆောင်း ဦး ရာသီသည် plaids, ဖယောင်းတိုင်နှင့်အထူးသဖြင့်ဟယ်လိုဝင်းအတွက်ရာသီဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်နွေးထွေးသောဆွယ်တာအင်္ကျီကိုဝတ်ပြီးအပြင်၌မိုးရွာနေစဉ် Netflix ကိုစောင့်ကြည့်ရန်အိမ်တွင်ရက်ပေါင်းများစွာနေရန်အကောင်းဆုံးသောအခွင့်အရေးဖြစ်သည်။ စက်တင်ဘာလမှာပရိုဂရမ်ရေးဆွဲခြင်းအတွက်အံ့သြစရာများစွာရှိခဲ့ရင်ဒီလမှာလည်းအလားတူပါပဲ။ အပူချိန်ကျဆင်းနေသည့်အတွက်သင်အလွန်စိတ်မကောင်းဖြစ်သော်လည်းပလက်ဖောင်းသို့ရောက်ရှိလာသောအသစ်အဆန်းများသည်သင့်မျက်နှာကိုပြုံးပြရန်အတွက်လုံလောက်သင့်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။ သင့်ကိုအကြံပေးမည့်အရာတစ်ခုထက်မက၊ ဆောင်း ဦး ရာသီတွင်ထမင်းစားပြီးပျော်မွေ့ရန်သင့်ဆိုဖာပေါ်တွင်ထိုင်ပါ။
PLAYOFF သို့လာသောအခါအောက်တိုဘာလသည်သင့်ကိုအပြည့်အဝကျေနပ်သင့်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စင်စစ်အားဖြင့်ပလက်ဖောင်းသည်သင့်အားပထမဆုံးရာသီကိုပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည် ပဲရစ်မှာအမ်မလီ Viola Davis ၏ပရိသတ်များသည်နောက်ဆုံးရာသီ၌ပျော်မွေ့နိုင်စဉ် Lily Collins က ၀ တ်ဆင်သည် လူသတ်မှု. မင်းကိုယ့်ကိုကိုယ်ကြောက်အောင်လုပ်ရင် Bly Manor ၏သရဲခြောက်သော သင်၏ဟယ်လိုဝင်းပါတီ၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာဖြစ်လာနိုင်သည်။ သင့်အားအစီအစဉ်နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့ချန်ထားသည်။
အောက်တိုဘာ ၁– Radiant (ရာသီ ၂)၊ လူသတ်မှု (နောက်ဆုံးရာသီ)
အောက်တိုဘာ ၂– ပါရီရှိအမ်မလီ
အောက်တိုဘာ ၉ ရက် - Bly Manor ၏သရဲခြောက်ခြင်း
အောက်တိုဘာ ၁၁: လူစိမ်း (ရာသီ ၂)
အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက် - လူမှုအကွာအဝေး
Chadwick Boseman: အနက်ရောင် Panther ကြယ်ပွင့်ကို Belton တွင်မြှုပ်နှံခဲ့သည် ...
"Africa Mia": တီထွင်ခဲ့သောထိုမာလီယန်များ၏ခြေရာကို ...
အောက်တိုဘာ ၁၆ ရက် - Star Trek: Discovery (ရာသီ ၃)၊ တော်လှန်ရေး၊ Grand Army
အောက်တိုဘာ ၂၂ ရက်။ သင်နှင့်ကျွန်ုပ်သည် (ရာသီ ၅)
အောက်တိုဘာ ၃၀: Suburra (နောက်ဆုံးရာသီ)
ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွင် Netflix သည်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်ခြင်းကိုပြန်လည်ကြည့်ရှုရန်အခွင့်အရေးပေးခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပျက်စီးစေသည် clueless သို့မဟုတ် Nothing Hills မှာပထမဆုံးတွေ့ရတဲ့အချစ်။ Rebecca သည် Armie Hammer ခေါင်းစဉ်ဖြင့်ခေါင်းစဉ်တပ်ကာယခုလတွင်ထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်သော်လည်းသင်စိတ်လှုပ်ရှားသင့်သည့်အရာများလည်းရှိသည်။ အတိုချုပ်ပြောရရင်မင်းအကြိုက်ဆုံးပလက်ဖောင်းရဲ့ကုမ္ပဏီမှာအေးအေးဆေးဆေးနေဖို့အချိန်တန်ပြီ။
အောက်တိုဘာ ၁ ရက် - ဂုဏ်သိက္ခာ၊ ကူမန်း၊ အသုဘမင်္ဂလာဆောင်၊ မိန်းကလေးဂိုဏ်း
အောက်တိုဘာ ၆– Conor McGregor: နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားခဲ့သည်
အောက်တိုဘာ ၂၁ ရက် - ရေဗက္ကာ
အောက်တိုဘာ ၂၃ ရက်။ ။ လသို့ခရီး၊ ပင်လယ်သွားများ၊ Nothing Hills ရှိပထမ ဦး ဆုံးမြင်တွေ့ရသည့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ
အောက်တိုဘာ ၃၀: Bronx
ဘာကြောင့် Amber ကြားရတာကိုယုံသင့်တာလဲ ?? - ဗီဒီယို